DigitalTwin - Geofumed
Bentley Systems waxay magacawday Dr. Nabil Abou-Rahme oo ah Agaasimaha Cilmi baarista
Dugsiyada tacliinta sare ee Bentley Digital Digital Academy waxay ku dadaalayaan inay taageeraan mashruucyo muujinaya bandhigyo muujinaya faa'iidooyinka kaabayaasha dhismaha twin digital. LONDON, UK - Abaabulka Abaabulka Mustaqbal ee mustaqbalka - 10 April, 2019 - Bentley Systems, Incorporated, bixiyaha hormuudka ah ee caalamiga ah ee xalalka dhammeystiran ee software si loo horumariyo ...
tabo cusub, Microstation-Bentley
Leica Airborne CityMapper - xalka xiiso leh ee khariidadaha magaalooyinka
Waxaa macquul ah in aanan waligeen arki doonin SmartCity run ah, oo leh aragti muhiim ah. Waxaa suurtagal ah in ay jiraan baahiyo aasaasi ah oo ku saabsan mawduucyadayada intii aan ka fekereyno internetka. Xitaa, waxa soo saareyaasha wax soo saaraya, cidina way weydiisatay. Xaqiiqdu waxay tahay in jinsiyadda ay ku taagan tahay ...
BIM DigitalTwin IoT My aragti ugu horeysay SmartCities